Factorylọ ọrụ China Polyester Felt na ndị na-emepụta | Huasheng
Aha Ngwaahịa Polyester Felt
Ihe 100% Polyester
Osisi ike 0,5mm-70mm
Ibu ibu 40gsm-7000gsm
Ozo kacha ruo 3.3m
Ogologo 50m / mpịakọta, 100m / mpịakọta ma ọ bụ ahaziri ahazi
Achịcha agba dị ka Pantone Agba Kaadị
Ọkpụkpụ na-enweghị aka na-akapịa
OA, REACH, ISO9001, AZO
A na-eji polyester fiber (akpọrọ ka a na-akpọ PET fiber) bụ eriri na-emepụta sịntetik sitere na polyester spinning guzobere site na polycondensation nke organic dibasic acid na mmanya mmanya. A na - ejikarị polyester mee ihe na - abụkarị polyethylene terephthalate.
Polyester chere bụ agịga na-akpụ akpụ akpụpụtara site na eriri polyester. A na-eji eriri polyester na agịga pụrụ iche, otu nwere obere ihe mgbochi na njedebe. Ihe mgbochi ndị a na-adọta polyester n'ime onwe ya, na-akpọchi ọnụ iji mepụta akwa.
A na-ekwu Polyester n'ọtụtụ dịgasị iche iche na oke iji gboo mkpa gị. Ọ na-enye ọnụọgụ dị ọnụ ala karịa ajị anụ, enwere ike iji ya na ọtụtụ ngwa ọrụ na azụmaahịa. Monarch Textiles na-emepụta agịga pọpụlụ polyester chere ngwaahịa iji mezuo nkọwa gị.
Ngwaahịa Polyester chere na-enye ọtụtụ elele. Ọ bụghị naanị na polyester nwere mmetụta dị ọnụ karịa ajị anụ, mana agịga polyester nwere mmetụta na-enyekwa nguzogide Organic acid, mildew, ọcha ọbara na ndị ọzọ na-egbu ihe nwere ike imebi ihe ahụ.
Uru ndị ọzọ nke polyester felts gụnyere
Nnukwu ọkụ enwere
Nguzogide na-eyi na ìhè anyanwụ
Odi nma maka ngwa okpomoku
Ezigbo maka nchịkọta unyi
Urabledabere, mgbanwe, ịdị mfe nrụrụ, nkwụghachi ọnụnọ, mkpuchi ihe, ọghọm, ịsacha dị mfe na njimara ngwa ngwa.
Nchọpụta DIY, usoro agbamakwụkwọ / ihe ngosi, ihe ịchọ mma ekeresimesi, Coaster na ebe-ebe, akpa, akpụkpọ ụkwụ, akpa, onyinye onyinye, mma ime.
Nke gara aga: Wool frized